Golaha Shacabka oo Beri kulmaya & Ajandayaasha oo la shaaciyay - Awdinle Online
Golaha Shacabka oo Beri kulmaya & Ajandayaasha oo la shaaciyay
Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa waxaa la filayaa in Maalinta berito ah ay yeeshaan kulan xasaasi ah kadib markii uu qabsoomi waayay kulan ay shalay yeelan lahaayeen.
Gudoonka Golaha Shacabka ayaa Xildhibaannada Maanta u diray in uu jiro Kulanka Golaha, isla markaana Ajandayaasha ay yihiin Caabuqa COVID19 iyo u Codeyn labada xubnood ee Guddiga Madaxa Banaan ee Xuduudaha.
Kulankii shalay baaqday iyo kan Maalinta Berito ah Xildhibaannada la filayo in ay yeeshaan ayaa waxaa Xildhibaannada qaarkood sheegeen in uu ku hoos jiro Ajande ku saabsan muddo kororsi loo sameeyo Hay’adaha dowladda oo muddo xileedkooda dhamaaday.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa qoral uu soo saaray xalay waxaa uu kusoo bandhgay 15 kamid ah Xildhibaannada oo laga mamnuucay inay ka qeyb galaan 5 kulan ee soo socda, kadib markii uu ku eedeyay inay hor-ustaageen qabsoomida kulankii shalay.
Xildhibaannada qaarkood oo hadlay ayaa waxaa ay sheegeen in Go’anka uu qaatay Guddoomiyaha Golaha Shacabka uu yahay mid sharci darro ah, isla markaana u hoggansami doonin.
Kulanka Golaha Shacabka ay Maalinta Berito ah yeelanayaan ayaa waxaa uu noqonayaa mid xasaasi ah oo isha lagu wada haayo, waxaana Xildhibaannada mucaaradka ay sheegayaan in marnaba kulankaas aan laga hor-isaatgi karin inay ka qeyb galaan.
Previous articleSenator Cumar Cabdirashiid” Waa In La Cunaqabateeyo kuwa qaska ku wada heshiiska 17-kii September
Next articleJabril “ Siyaasiyiinta caqabada ku ah geedi socodka doorashooyinka, waxa ay ku dul ciyaarayaan dab”